नेकपा खोटाङको अध्यक्षमा दंगालको सम्भावना वलियो - Nepal's Online News
नेकपा खोटाङको अध्यक्षमा दंगालको सम्भावना वलियो
खोटाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहको एकताले यतिबेला निक्कै चर्चा पाएको छ । नेकपाको केन्द्रीय जनवर्गीय संगठन, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको यस समयमा खोटाङ जिल्ला एमालेले सम्हाल्ने गरि सहमति भए पुर्व एमालेका तीन नेता अध्यक्ष पदको दावेदारमा रहेका छन् । जिल्ला उपाध्यक्ष रामप्रसाद दंगाल, सचिव देव विक्रम राई र सहसचिव कुमार आचार्य अध्यक्ष पदको लागि जस्तो सुकै मुल्य चुकाउँन पनि तयार भएपछि एमाले खोटाङमा अध्यक्ष छनौटको विवाद चुलिदै गएको पाईएको छ । खोटाङ्ग माओवादीले पाएको खण्डमा कार्यदलबाटै निर्विवाद अहिलेका पार्टी इन्चार्ज ध्रुव बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाईने जनाईएको छ ।
नेकपामा प्रदेश नं १ अन्तर्गत एमालेले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, भोजपुरको नेतृत्व पाउने समझदारी भएको छ । माओवादीले संखुवासभा र खोटाङमा पाउने सहमति भए पनि ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र उदयपुरको भागबण्डा नमिलेका कारण कार्यदलले सिफारिस गर्न सकेको छैन । उक्त जिल्ला मध्ये ओखलढुंगा वा सोलुखुम्बु मध्ये एक माओवादीले लिए खोटाङ्ग जिल्ला एमालेको पकडमा जानेछ ।
एमालेले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, भोजपुरको नेतृत्व पाउने सहमति अनुसार टुंगो लागिसकेको छ ।
माओवादीले संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर मध्य एक छोड्नेगरी सहमति नजिक रहेको जनाएको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले खोटाङ नै छोडेर बाँकी जिल्लामा नेतृत्व खोजिरहेको छ । खोटाङ्ग माओवादीले पाएको खण्डमा कार्यदलबाटै निर्विवाद अहिलेका पार्टी इन्चार्ज ध्रुव बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाउँनेमा माओवादीमा दुईमत नरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिएका छन् । माओवादीले खोटाङलाई स्विकारे पार्टी इन्चार्ज ध्रुव बुढाथोकी जिल्लाका अध्यक्ष बन्ने छन ।
खोटाङ्ग छोडेर ओखलढ्ंगा माओवादीले रोजेमा खोटाङ्गको नेतृत्व तत्कालिन एमालेले पाउँनेछ । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामप्रसाद दंगाल, सचिव देवविक्रम राई वा उपसचिव कुमार आचार्यमध्ये कसले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँछन भन्नेमा यतिखेर बहसको विषय भएको छ ।
एमालेबाट अध्यक्ष पदका लागि तीन जनामध्ये रामप्रसाद दंगाल बलियोरुपमा देखिएका छन् । एमालेका एक केन्द्रिय नेताले प्रभाव न्युज डटकमसंग कुरा गर्दै भनेका छन, दंगाललाई नेतृत्वका लागि तयारीमा लाग्न भनिसकिएको छ । दंगाल अध्यक्ष हुने पक्का हुनेछन् । यस कारण पनि दंगाल अध्यक्ष हुने पक्का भएको छ कि दंगाल जिल्ला उपाध्यक्ष हुन । उनको वरियता पनि अध्यक्ष हुने नै हो । यसमा पार्टीले पनि मध्यनजर गर्ने एमालेका एक नेताले जनाएका छन् । दंगाल कार्यक्रताहरुले रुचाएका नेता पनि हुन् । यदि दंगाल अध्यक्ष नबने आम कार्यक्रताहरुमा निराशा उत्पन्न हुने नाम नखुलाउँने शर्तमा जनवर्गिय संगठनका प्रमुखले जानकारी दिएका छन् ।
आफु उपाध्यक्ष भएका कारण स्वतः नेतृत्वको दावेदारीमा रहेको दंगालले बताएका छन् । बाहिर आएका नाममा कमरेडहरु तल्लो वरियतामा हुनुहुन्छ भावी दिनका लागि नेतृत्वको तयारी गर्दा हुन्छ । अहिले मेरो पालो हो । मलाई विश्वास छ पार्टीले मेरो योगदान भूल्ने छैन उनले भने ।
वरियता मिचेर उपाध्यक्ष पदमा रहेका दंगाललाई तल पार्दै गर्दा त्यो झन भावी दिनका लागि समेत समस्या हुने भएकाले पनि दंगाललाई अध्यक्ष बनाउँन लागिएको एमाले एक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
खोटाङमा जतिसक्दो एमालेबाट नै नेतृत्व दिलाउँनक लागि कडा प्रयास भईरहेको एमालेका उपसचिव कुमार आचार्य बताए । उनले भने, “अध्यक्ष पदका लागि म कडा ढंगले लागिरहेको छु, हेरौं पार्टीले मेरो योगदानलाई भुलेन भने म अवश्यक अध्यक्ष बन्नेछु ।
वरियतामा त तपाईको पालो आएको छैन, फेरी पार्टीले वरियतालाई आधार बनाएर गयो र उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनायो भने तपाई स्विकार्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आचार्यले पार्टीले गरेको निर्णयलाई स्विकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।
एमालेका सचिव देवविक्रम राईले आफु पनि अध्यक्ष पदमा दावेदार रहेको बताएका छन् । राईले पदीय वरिष्ठतताको पनि आफ्नो आफ्नै व्याखा हुन्छ, पदीय वरिष्ठतता खोटाङका सन्दर्भमा विगतमा मिचिएको पनि छ, यसैले यो पदीय वरिष्ठतता निर्णायक सधै हुँदैन ।
पूर्व एमालेले वरियतालाई मिचेर आफु अनुकुलका नेतालाई अध्यक्ष बनाउँदै गर्दा पार्टीभीत्र ठुलो समस्या आउँने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ । उपाध्यक्ष रामप्रसाद दंगाललाई अध्यक्ष बनाएर वरियताको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्ने एमाले कार्यक्रताहरुको माग रहेको छ ।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा खोटाङ क्षेत्र नम्बर एकका प्रदेश सभा सदस्य राजन राईले विगतका दिनमा पनि एमालेभीत्र सहमतिका आधारबाट “सोलुसन” निकालिएको ईतिहास रहेकाले कुनैपनि विवाद नगरि विधि र विधानमा रहेर उपयूत्र्त किसीमको सहमति गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “ईतिहासलाई जीवन्त राख्दै अध्यक्ष पदमा विवाद नगरि सहमतिमा टुङ्याउनु जरुरी छ ।”
को हुन राम प्रसाद दंगाल ?
खोटाङ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र तत्कालिन बतासे गाविस हाल दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका –४ घर भएका राम प्रसाद दंगाल कम्युनिष्ट आन्दोलका एक हस्ति मानिदै आएका छन् । खोटाङ जिल्लामा तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टी भीत्रकै इमानदार, स्वच्छ छवि भएका दंगाल क्षमता र वाक शक्तिमा अव्वल मानिदै आएका छन् । २०४२ सालदेखि अनेरास्ववियू एकताको पाँचौ कम्युनिष्टबाट राजनीतिमा होमिएका दंगाल बतासेको अनेरास्ववियू अध्यक्ष हुँदै २०४६ साल जिल्ला सदस्य बनेका थिए । पार्टीको गाउँ सचिव, ईलाका, अध्यक्ष, २०४७ सालमा खोटाङ विराठनगर सम्पर्क कमिटिको अध्यक्ष, २०४७ सालमा महेन्द्र मोरङ कलेज प्रा.क सचिव, ईलाका कमिटि क्षेत्रिय कमिटि हुँदै २०५४ सालदेखि लगातार जिल्ला कमिटिमा र कमिटिका सवै बिभागको प्रमुख सचिव उपसचिव र उपाध्यक्ष बनेर नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।
दंगाल २०५० सालमा दासढुङगा हत्या काण्डको आन्दोलमा प्रहरी दमन परेर दुईवटा दाँत गुमाएपछि थप प्रभावकारी नेताको रुपमा उदाएका थिए । माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा दंगाल ४२ दिन अपहरण परेको थिए । २०५४ सालमा नेकपा एमाले फुट्दा नेताहरु हरी पोखरेल, कर्ण घले, पर्शुराम कार्की देवी रेग्मी र राम दंगालले पार्टीलाई एमालेको पक्षमा ढृढतापूर्ण सम्हालेका थिए । यतिमात्रै हैन देशको कुनैपनि आन्दोलन र पार्टीलाई संकट पर्दा ढाल जस्तो उभिने नेताका रुपमा रहेका छन दंगाल । पार्र्टीका गतिविधहरुमा जिल्लामै रहेर क्रियाशिल रुपमा खट्दै आएका छन्, दंगाल ।
को हुन कुमार आचार्य ?
खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल–१ घर भएका कुमार आचार्य पनि कम्यूनिष्टको एक ईमान्दार सिपाहीका रुपमा आफुलाई ठान्ने गरेका छन् । २०३९ सालमा तत्कालिन माले पार्टीमार्फत राजनीतिमा उद्धाएका आचार्य २०४८ सालदेखि ५१ सालसम्म दिक्तेल गाउँ कमिटिको सचिव भएर काम गरेका थिए । २०५२ साल देखि निरन्तर जिल्ला कमिटिमा रहेका आचार्य २०७० सालको अधिबेशनबाट पार्टीको उपसचिव पदमा चयन भएका थिए । आचार्य पार्टीसंगै अन्य धेरै समाजिक संघसस्थमा काम गरिरहेका छन् । आचार्य एमाले फुटेर माले भएको समयमा एमाले परित्याग गरि माले भएका थिए ।
को हुन देवविक्रम राई ?
बुईपा गाविस हाल दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ घर भएका देवविक्रम राई २०३७ सालमा १२ वर्षको उमेरदेखि कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यो वेलाको जल्दोवल्दो आन्दोल न शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएका राई कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा विभिन्न समयमा पार्टीका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछन् । राई सुनसरीको धरानमा अध्यनरत रहँदा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको खोटाङ सुनसरी कमिटिको अध्यक्ष, एमालेको खोटाङ काठमाण्डों सम्पर्क मंन्चकोे कोषाध्यक्ष, सचिव, अञ्चल सम्पर्क मन्चको सल्लाहाकार, पार्टी निकटको साहित्यिक संगठन जनसाहित्यक मन्चको संस्थापक केन्द्रिय सचिवालय सदस्य, जिल्ला कमिटिको सचिवालय सदस्य, हुँदै २०७२ सालमा भएको छैटो जिल्ला अधिबेशनबाट पार्टीको जिल्ला सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।